people Nepal » अबको सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने:प्रदिप ज्ञवाली अबको सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने:प्रदिप ज्ञवाली – people Nepal
Posted on December 28, 2017 by Tara Nidhi
नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले अबको सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएपनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्नेबारे कुनै टुँगो नलागेको बताए । उनले पार्टी एकताबारे गृहकार्य सुरु भैसकेको बताउँदै छिट्टै यसले सार्थकता पाउने विश्वास दिलाए । जनताको चाहना नै एकता भएकोले सोही अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने पनि उनको भनाई थियो । सचिव ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थायी कमिटि बैठकले के निर्णय गर्यो ?
निर्वाचन सम्पन्न भएकोमो खुशीयाली व्यक्त गरियो । वाम गठबन्धनलाई भारी बहुमत दिने आम मतदाताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकाय लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै मुलुक अब समृद्धि र स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढ्यो र संक्रमणकाल टुँग्गियो भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ । यो बीचमा जति पनि उतार चढाव थिए, विकृति थिए अब त्यो समस्या समाधानको दिशामा अब मुलुक अगाडि बढ्यो ।
दोस्रो, निर्वाचन सम्पन्न भएको लामै समय भएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विभिन्न बहाना गरेर खासगरी राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशमा एक खालको अग्र्याल्याँई झिकेर सहज सत्ता हस्तान्तरणमा असहजता उत्पन्न गरिरहेको स्थिति देखिन्छ । त्यसो गर्नु अनुचित हुन्छ । जनताको जनादेशको भावना विपरित हुन्छ । यसर्थ नयाँ सरकार गठनमा मार्गप्रशस्त गर्न ध्यानाकार्षण पनि गराएको छ ।
उसो भए एमाले र माओवादी केन्द्रवीचको एकताको लागि बैठकमा मापदण्ड बनेन ?
किन नबन्नु नि । छिट्टै एकता हुन्छ । एकताको लागि सघन रुपमा गृहकार्य अघि बढ्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त आलोपालो प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभएको छ नि, यसमा सत्यता छ ?
उहाँले के भन्नुभयो त्यसमा मैले फष्टह्याण्ड केही बुझेको छैन । जनताको अहिलेको जनादेश भनेको मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति दिगो सरकार हो । स्थायित्व सुनिश्चित हुनेगरि हामी अगाडि बढ्छौं । दुई वटा पार्टी एकता हुँदाखेरि दुवैको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा र भूमिकालाई कदर गर्ने काम त हुन्छ नै । तर एकता भनेको आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री खान वा बन्नको निम्ति भन्दा पनि देशलाई सही निकास दिनको निम्ति हो । त्यसो भएको हुनाले त्यही हिसाबले नै हामी अघि बढ्छौं ।
तर पदीय बाँडफाँड त गर्नुपर्ला नि ?
त्यो त अवश्य हुन्छ नि । तर नेताहरुको वीचमा पदीय व्यवस्थापन वा बाँडफाँड गर्ने भन्दापनि ठूलो कुरा देशको व्यवस्थापन हो नि । देशमा सुशासन कायम गर्ने कुरा चाहीँ प्रमुख कुरा हो । यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेका छौं । त्यसो गर्दा कुन नेतालाई कुन जिम्मेवारी दिँदा उहाँले सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसमा हामी त्यही ढंगले सोच्छौैं ।
अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने त निश्चित भयो तर पार्टी अध्यक्ष चाहीँ को त ?
अवश्य पनि अबको प्रधानमन्त्री को भन्नेमा कुनै शंकै छैन । तर पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्नेबारे अहिले किन हतारिनु छ र ? अध्यक्ष को बन्छ भन्नेबारे गृहकार्य भैरहेको छ । अहिले नै भन्ने बेला भएको छैन ।
उसो भए एकतापछिको पार्टीको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेबारे तपाईहरु निर्णयमा पुग्नुभएको छैन ?
हामी गृहकार्यमा जुटेका छौं । गृहकार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा हामी उपर्युक्त ढंगले निर्णय लिन्छौं । सबै नेताको योग्यता, क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्नेगरि नै हामी व्यवस्थापन गर्छौं ।
वाम गठबन्धनमा कुनै दरार पैदा हुँदैन ?
आउँदैन । कुनै पनि समस्या आउँदैन् । जनताले नै गठबन्धनलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । अब त पार्टी एकता त केबल केपी ओली र प्रचण्डको मात्रै एजेण्डा रहेन, बरु यो त आम नेपालीहरुको एजेण्डा बन्यो । हामीलाई भोट दिने ५० लाख जनताले अनुमोदन गरेको एजेण्डा हो । यसमा दरार आउने कुनै संभावना छैन । झनै सुदृढ भएर जान्छ ।
सरकार गठन गर्न कति समय लाग्छ ?
हामीले आशा गरेका छौं आउने आईतबारसम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्छ । त्यो सार्वजनिक हुनेवित्तिकै सरकार गठनको बाटो खुल्छ । प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउने वित्तिकै बहुमत प्राप्त दलको नेता चाहीँ प्रधानमन्त्री बन्ने अहिलेको हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म म राजिनामा दिन्न भन्नुभएको छ नि ?
त्यो उहाँको अनावश्यक जिद्दि हो । गैर संवैधानिक जिद्दि हो । राष्ट्रिय सभाको गठन र नयाँ सरकार यी दुवै नितान्त भीन्न भीन्न विषय हुन् । यीनीहरुवीच आपसमा अन्तरसम्बन्ध नै छैन । किनभने सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका नै हुँदैन । संसदको अरु काम कानून निर्माण लगायतमा भूमिका हुने भएपनि सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका हुँदैन् । त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म सरकार छोड्दिन भन्नु गलत हो ।
तर संघीय संसद त सँगै बोलाउनुपर्छ नि ? होईन र ?
त्यस्तो हुँदैन । तपाईले विगतमा हेर्नुभयो होला नेपालले दुई सदनात्मक संसदको अभ्यास पहिलोपटक गरेको होईन नि त। संघीय संसद बन्नको लागि राष्ट्रिय सभा अनिवार्य हुन्छ ।
तर अध्यादेश त राष्ट्रपतिकहाँ छ, उहाँले स्विकृत नै गर्नुभएको छैन ?
यो अध्यादेश हरेक हिसावले गलत छ ।
कसरी गलत छ ? प्रधानमन्त्रीले बुझाएको अध्यादेश होईन र ?
प्रधानमन्त्रीले दिएको सबै कुरा राम्रो हुन्छ र ? उहाँले त संविधान अनुसार काम गर्नुपर्यो नि । संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले लामो समयसम्म यसबारेमा छलफल गरेकै हो। एकल संक्रमणीय मतको आधारमा त्यही भएर संविधानमा उल्लेख नै नगरेको हो । कांग्रेसले खेलको नियम सुरु भैसकेपछि अचानक खेलको नियम परिवर्तन गर्यो । वाम गठबन्धन बनिसकेपछि हामी क्लिनस्फि हुन्छौ कि भन्ने देखेर एकल संक्रमणीय मतको आधारमा भनेर लेख्यो । यो अध्यादेश असंवैधानिक छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र एमाले अध्यक्षवीच के कुराकानी भएछ ?
उहाँले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा नेपाली जनतालाई बधाई दिनुभयो । यो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलतामा पनि केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिनुभयो । र, नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू एकदमै आँतुर रहेको र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो र स्वागत गर्न ईच्छुक रहेको उहाँले बताउनुभयो । र अब नेपालले स्थायित्व र विकास गर्छ भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको मोदीले बताउनुभयो । प्रतिउत्तरमा हाम्रो अध्यक्षले बधाई दिएकोमो धन्यवाद दिँदै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चाहीँ समृद्धि र सुशासन रहेको बताउनुभयो । ओलीले पनि मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभयो ।